Biyyoonn Afur Dhimma Sudaan Ilaalchisuun Ibsa Baasan
Muddee 16, 2021
Namoota hiriira mormii Muddee 6, 2021 Kaartum keessatti doghame irratti argaman keessa
Saud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yunaayitid Isteetisii fi Briten walii galtee siyaasaa Sudaan kan Sadaasa 21 irra ga’ame kan Dr. Abdallaa Hamdook gara taayitaa muummicha ministeerummaatti akka deebi’an taasise kan isaan jajjabesse ta’uu ibsanii jiran. Akka galmee heeraa bara 2019 irra taa’ee jirtutti kun, rakkoo siyaasaa Sudaan hiikuuf akkasumas biyyattii gara daandii ce’umsa dimokraasiitti geessuuf tarkaanfii jalqabaa ti.
Kanneen walii galtee kana mallatteessan waadaa seenan akka kabajan yaadachiifna jedha ibsi kun. Gama kanaan hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu isaanii galateeffachuu dhaan kanneen mormitoota irratti tarkaanfii humnaa fudhatan seeraan akka gaafatmu kan taasisu koreen dhimma isaa qoratu akka hundaa’u gaafannaa jedha ibsichi. Labsii yeroo hatattamaa ta’ee jirus dhiyeenyatti kaasuuf cicha jiru amannee hojii irra akka oolu ni gaafanna.
Mootummaa sivilii kan ogeessota walabaa ofitti haammate hundeessuuf sochii jalqabame ni jajjabeessina. Akkasumas baatii Sadaasa 21 walii galtee irra ga’ame irratti ibsa siyaasaa kennamee fi michummaa sivilii fi waraanaa kan bara 2019 mara adeemsa marii siyaasaa keessatti hirmaachisuun barbaachisaa ta’uu isaa cimsinee yaadachiisna. Karoorri filannoo xumura bara 2023 ykn jalqaba bara 2024 dursee qophaa’uun barbaachisaa ta’uu isaas cimsinee yaadachiisna jedha ibsi walooon biyyoota armaan olitti tuqamaniin ba’e kun.
Uummata Sudaanii fi deggersa waloo fi dhunfaan qabnu akkasumas fedhii uummatichi dimokraasii fi biyya nagaa fi tasgabbaa’aa arguuf qabus ni deggerra. Mormiin geggeessamaa jiru uummati sudan ce’umsaaf murannoo cimaa inni qabu mul’isa. Hookkara isaan eegunis dursi kennamuufii qaba.
Saud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yunaayitid Isteetisii fi Briten kanneen ce’umsa dimoktaatawaa sudaan keessaaf hojjetan mara gargaaruuf qophee ta’uu keenya mull’isna jedha ibsi kenname kun.